Budata Tupolev TU -95MS “Bear” FS2004 - Freeware
Kpara Russian nuclear otu bombu, otu n'ime ihe nnọchianya nke Agha Nzuzo. Otu ihe atụ nke Ekliziastis. Kere 1954, e emeziri ọtụtụ ugboro, ma ugbu a ịwa ke Russia. Ọtụtụ nsụgharị: M, K, KR, Tu-142, Tu-119 (na engine - nuclear chernobyl), etc .. E nwekwara a ndi nkiti na version nke Tu-114. Otu n'ime ndị kasị ọsọ TURBO-prop na ụwa (8 propela ọsọ uru nke ihe karịrị 500 mi / h). Nlereanya a na-awa ya kasị zuru okè version: na Tu-95MS. Ụgbọelu na nwere nku akụ ụta X-55 "Bear", plus 3 textures: Russian AF (VVS), Ukrainian AF (VPS) na USSR AF (64).
G-max nlereanya zuru ezu na-aga aga, zuru VC na animated gauges. Ọhụrụ abụọ na-akpata: mmetụta nke anwụrụ ọkụ na dobe agba X-55. Aha faịlụ mbụ: TUPOLEV-TU95MS-AND-REPAINT.rar, tu95updt.zip
kere 9 Dec 2008
emelitere 13 Jul 2012
Ihe ngosi Microsoft Flight 2004